सबै भन्दा राम्रो छुट फोटोग्राफी कोर्स | क्रिएटिव अनलाइन
क्रिएटिव अनलाइन | | फोटोग्राफी
बन्डल को एक कम्पनी हो जो अनलाइन पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्नमा विशिष्ट छ। यसमा हामी उनीहरूको सेक्टरमा प्रख्यात लेखकहरूले सिर्जना गरेका पाठ्यक्रमहरू पाउँछौं। त्यसैले तिनीहरू गुणस्तरीय पाठ्यक्रम हुन्। यद्यपि उनीहरूले ठूलो छूट पाउँछौं जुन हामी फेला पार्दछौं। किनकी उनीहरूको मूल्यहरू उनीहरूको सामान्य मूल्य हुने भन्दा धेरै कम छन्। यस अवसरमा, कम्पनी हामीलाई एक साथ छोड्छ फोटोग्राफी कोर्सहरूको चयनमा उत्कृष्ट प्रस्ताव.
त्यसकारण, प्रयोगकर्ताहरूका लागि जो उनीहरू फोटोग्राफी कोर्स लिने सोचमा थिए, यो राम्रो मौका हो। किनकि हामी बन्डल को यस नयाँ पदोन्नति मा ठूलो पाठ्यक्रम फेला पार्दछ साथै, यो एक अस्थायी पदोन्नति हो। त्यसोभए तपाईले छुट पाउन चाँडो हुनु पर्छ
तपाईं सक्नुहुन्छ २१ फोटोग्राफी कोर्सहरूको साथ बन्डल किन्नुहोस् लिंकमा एउटाको मूल्यमा जुन हामीले भर्खर तपाईंलाई छोड्यौं
वेबमा प्रस्ताव गरिएका कोर्सहरू अ in्ग्रेजीमा छन्। यद्यपि अ English्ग्रेजीको ज्ञान भएका प्रयोगकर्ताहरूको लागि यो जटिल हुनेछैन। साथै, जहिले पनि, पाठ्यक्रममा यो एक व्यक्ति छ जुन क्यामेरासँग सुस्त रूपमा बोल्दै छ। त्यसोभए तिनीहरू के भन्छन् भनेर तपाईं बुझ्नुहुनेछ। सबै बन्डल को कोर्सहरूमा अतिरिक्त सामग्री छ।
तिनीहरूसँग सँधै पाठ र स्पष्टीकरणको साथ एक पीडीएफ हुन्छ। यो पछ्याउन सजिलो छ, र यो आवश्यक भएमा कुनै समस्या बिना यसलाई अनलाइन अनुवाद गर्न सजिलो छ। त्यसोभए तपाईले यी कोर्सहरू अनुसरण गर्दा कुनै पनि समय भाषा समस्या हुने छैन।
1 Bundle Co मा सर्वश्रेष्ठ मूल्यमा फोटोग्राफी कोर्सहरू
2 बन्डल को मा अस्थायी पदोन्नति
Bundle Co मा सर्वश्रेष्ठ मूल्यमा फोटोग्राफी कोर्सहरू
फोटोग्राफी अनलाइन कोर्सहरूमा उच्च माग गरिएको विषय हो। तसर्थ, बन्डल को बाट तिनीहरू ल्याउँछन् तिनीहरूले हामीलाई यस विषय मा ठूलो चासो को केहि पाठ्यक्रमहरु संग छोड्छन्। सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि त्यहाँ फोटोग्राफी खण्ड भित्र सबै प्रकारका पाठ्यक्रमहरू छन्। तसर्थ, तपाईं एक सानो अनुभव को साथ एक व्यक्ति हो, एक पेशेवर वा फोटोग्राफर धेरै मन पराउने कोही, त्यहाँ चासो को एक पाठ्यक्रम छ।
त्यहाँ कुल २१ नयाँ पाठ्यक्रमहरू उपलब्ध छन् तपाईं यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ?। यद्यपि यो व्यक्तिगत रूपमा तिनीहरूलाई छनौट गर्न सम्भव छ, यदि तिनीहरू सबै कोर्सहरू खरीद गर्छन् भने उनीहरूले हामीलाई बुन्डल कोबाट छोड्ने प्रचार हो। त्यो अवस्थामा, छुट छ कि उपलब्ध छ ठूलो छ। तसर्थ, यो विचार गर्न एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ।
वेबमा कुन केसहरू यस केसमा उपलब्ध छन्? यो पाठ्यक्रमहरूको पूर्ण सूची हो, तिनीहरूका वास्तविक मूल्यहरूको साथ, यदि तपाईं तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा करार गर्न चाहनुहुन्छ:
क्याप्चर कोर्स, लिन्डसे डेभनपोर्ट द्वारा (नियमित रूपमा $ १147)
आईफोन फोटोग्राफी कोर्स, लेस अफ हौने द्वारा (नियमित रूपमा $)))
खराब प्रकाशको बारेमा सबै, जस्टिन Mary मैरीद्वारा (नियमित रूपमा $)))
एक व्यावहारिक सगाई कोर्स, एबी ग्रेस द्वारा (मूल मूल्य $)))
जुली पेस्ली द्वारा विवाह कोर्स, (नियमित $ २२ $)
मिठाई मार्ग द्वारा मीठा अपेक्षा पाठ्यक्रम (नियमित खरीद मूल्य $ १189))
नवजात 8 परिवार फोटोग्राफी, स्यान्ड्रा कोन द्वारा (नियमित रूपमा $ $))
तपाईंको फोनको साथ फोटोग्राफ लिटल अन्स, केटी लम्बद्वारा (मूल मूल्य $)))
Bauoir फोटोग्राफी गाइड, जेन हुआंग द्वारा (मूल मूल्य $ 78.99)
फूड फोटोग्राफी मास्टरक्लास, हामी सँगै खाने गर्छौं (नियमित रूपमा $ १ $$)
यात्रा फोटोग्राफी कोर्स, गैरी अर्नाट द्वारा ($ २ 295 at मूल्य)
गो-प्रो शूटिंग कोर्स, मोटा गाल फोटोग्राफी द्वारा (मूल मूल्य $ )०)
उत्पादन स्टाइलिंग कोर्स, जेनिफर क्यारोल द्वारा (नियमित रूपमा $ २247)
रचना १०१ कोर्स, यदि | द्वारा बनेको (मूल्य $ २२))
फ्ल्याट लेरा परिचय कोर्स, रेबेका याले द्वारा (वास्तविक $ १147 by मूल्य)
फिल्म फोटोग्राफीमा न्यान्सी रे द्वारा आधारहरू (मूल मूल्य $ 547$XNUMX)
हाईब्रीड फोटोग्राफी (फिल्म + डिजिटल) गाईड, दशौं Gra ग्रेस द्वारा (नियमित रूपमा $$०)
कसरी एउटा सानो पोर्टफोलियोको साथ ग्राहकहरू बुक गर्ने, एबी वालर द्वारा (नियमित रूपमा $ )$)
काइली एनद्वारा सफल फोटोग्राफी व्यवसाय निर्माण गर्नुहोस् (मूल मूल्य $ २ 299))
इन पर्सन सेल्स कोर्स, जेनी मारोनी द्वारा (मूल मूल्य $ २237)
Belle Lumiére पत्रिका द्वारा (नियमित रूपमा $ १145) प्रकाशनको लागि शूटिंग
यी २१ पाठ्यक्रमहरू छन् जुन हाल उपलब्ध छन्। प्रयोगकर्ताहरूले ती मध्ये कुनै पनि छुट्टै छनौट गर्न सक्दछ, यदि त्यहाँ केवल एक मात्र छ जुन तपाईंलाई रूचि छ। यद्यपि बन्डल सीले हामीलाई सबै कोर्सहरूको प्याक किन्न एक शानदार प्रस्तावको साथ छोडिदियो। एक छुट छ कि तपाइँ विश्वास गर्न लागत लाग्नेछ।
तपाईंलाई यो मन पर्यो? तिमी सक्छौ यस लिंकमा बन्डल किन्नुहोस् र अहिल्यै तपाईको फोटोको गुणस्तर सुधार गर्न सुरु गर्नुहोस्।
बन्डल को मा अस्थायी पदोन्नति
यदि तपाईं गणित गर्दै हुनुहुन्छ भने, यी २१ कोर्सहरू पूर्ण भर्ती गर्ने 21 को लागत छ। यद्यपि यो तार्किक मूल्य हो कि विचार गर्दै तिनीहरू पेशेवरहरूले प्रस्ताव गरेको पाठ्यक्रमहरू हुन्, यो अत्यधिक हो। तर, बन्डल को हामीलाई यस शानदार विशेष पदोन्नतिको साथ छोड्छ।
स्टोरले हामीलाई सम्भावना दिन्छ तिनीहरूका लागि २१ ire कोर्स मात्र भाडामा 21। ..० डलर (विनिमय दरमा 98.50 86 यूरो) तिर्ने। त्यसोभए तपाईं यस शानदार अवसरको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। १०० भन्दा कमको लागि पेशेवर फोटोग्राफी कोर्सहरू। कुनै श doubt्का बिना, कुनै अन्य वेबसाइटले हामीलाई यस्तो संभावना प्रदान गर्दैन।
यद्यपि बन्डल को मा फोटोग्राफी कोर्सहरूको यो पदोन्नती अस्थायी हो। यो विशेष मूल्य मा तिनीहरूलाई किराया गर्न सम्भव छ भोली सम्म, यसका लागि फेब्रुअरी १२। फोटोग्राफी को बारे मा अधिक जान्न चाहने उपयोगकर्ताहरुको लागी एक उत्तम अवसर। यी पाठ्यक्रमहरू हुने यस अवसरलाई नबिर्सनुहोस्। हुन सक्छ यो लिंकमा सबै खरीद गर्नुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » फोटोग्राफी » सबै भन्दा राम्रो छुट फोटोग्राफी कोर्स
Adobe Photoshop मा हाम्रो डिजाइनहरूमा टेक्सचर लागू गर्नका लागि दुई तरिकाहरू